तीन बाहुन दल का पाँच कदम के हुनेछन्?
Denial: मधेसमा क्रांति भएकै छैन जस्तो गरे केही हप्ता।
Anger: चीनको डर देखाए, जातीय दंगा (प्रतिकार) को डर देखाउँदैछन्। आत्म निर्भर बनेर देखाई दिउँ भनेर घुर्की लगाउँदैछन्। जमीन मुनि को गैस निकालदिम? जलबिद्युत?
Bargaining: सीमांकन आयोग को कुरा गर्नेछन्। त्यस्तो भुल भुलैया मा फस्नु हुँदैन।
Depression: यो फेज पनि आउनेछ। त्यति बेला लाग्नेछ उनी हरु हतास छन, disengaged भए जस्तो।
Acceptance: अन्त्यमा ३५ बुँदे संविधान संसोधन गर्न तीन बाहुन दल राजी हुनेछन्।